Spain inoderedza kuburitsa kwayo gasi nekuda kwekudzoserwa | Green Renewables
Spain inoderedza kuburitsa kwayo gasi nekuda kweyakagadziriswazve
ChiGerman Portillo | | Simba reHygroelectric, Renewable simba
Greenhouse gasi inoburitsa inofanirwa kudzikiswa kuitira kuzadzisa zvinangwa zvakatemwa nechibvumirano cheParis. Nekudzikisa gasi rinoburitsa isu tinoedza kudzora zvinokanganisa shanduko yemamiriro ekunze.
Nesimba rinowedzerwazve, mweya unokwanisa kudzivirirwa sezvo iri simba rakachena. Spain yakaburitsa 323,8 mamirioni matani eCO2 muna 2016 3,5% yakaderera pane muna 2015, nekuda kwekuderera kunoshamisa kwemagesi necheni yemagetsi, mhedzisiro yekudonha kwe29% mukushandiswa kwemarasha uye kuwedzera kwechizvarwa chemagetsi chemagetsi che25,5% zvichienzaniswa negore rapfuura. Izvo zvinowedzerwazve zvinopa kudzikisira magasi?
Kuburitswa kwepasi rose kweSpain kwaive ne2016% yakakwira muna13 kupfuura muna1990.Gore ra1990 ndiro gore rinotsanangurwa rekubviswa kwegesi neKyoto Protocol. Nekudaro, muna 2016 26% mashoma magasi akaburitswa kupfuura muna 2005.
Idzi inhau dzakanaka mukutarisana nemhedzisiro yekuchinja kwemamiriro ekunze kuchikamu cheSpain. Nyika yedu iri panjodzi huru kune ese mamiriro ekunze anounzwa nekudziya kwepasi. Semuenzaniso, kukwira kwemwero wegungwa idambudziko rakakomba.
Spain yakazvipira kudzikisa emissions kubva kumaindasitiri chikamu ne21% zvichienzaniswa ne1990 na2020 uye emissions kubva kune yakapararira chikamu ne10% (izvo zvinosanganisira kurima, kutakura, kuvaka kana kurasa uye avo kuderedzwa kunoenderana, muchidimbu, pamitemo yenyika).
Gasi kubva kumaindasitiri (samende, bepa, makemikari, simbi uye zvimwe zvicherwa), iyo yaive ne38% yeiyo yose muna2016, yakadonha gumi muzana, nepo iyo yakabva munzvimbo dzakapararira ichikura 10% zvichienzaniswa negore rapfuura.
Nekudaro, kutakura, rinova iro basa rinosvibisa zvakanyanya sezvo paine mota zhinji dziri kutenderera, Inomiririra 27% yemagasi akazara, ichiwedzera ne3,1% zvichienzaniswa na2015.
Nhau dzakanaka ndedzekuti kana Spain ikaramba ichideredza kuburitsa kwayo, ichakwanisa kuzadzisa zvinangwa zvakagadzirirwa 2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Spain inoderedza kuburitsa kwayo gasi nekuda kweyakagadziriswazve
Schiphol nedzimwe nhandare nhatu dzeDutch dzichamhanya pazvinhu zvinodzokororwa zvega muna 3
Spain inodzokera kubheji pamasimba anowedzerwazve